डकविड (लेम्ना माइनर) एक द्रुत बृद्धि भएको जल प्रजाति हो जसले प्रोटीन र अन्य पौष्टिक यौगिकहरू समृद्ध गर्दछ। अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्शन अत्यधिक कुशल र भरपर्दो प्रसंस्करण टेक्नोलोजीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ प्रोटीन, लिपिड र फाइटो-पोषक डकविडबाट रिलिज गर्न। Sonication खाना र ग्रेड उत्पादनहरु को लागि duckweed को सरल र द्रुत उपचार को लागी अनुमति दिन्छ।
पौष्टिक उद्देश्यहरूको लागि Duckweed
डकवेड (जीनस लेमना), फूल फुल्ने जलीय बोट, सबैभन्दा सानो फूल लाग्ने बोट हो। भोल्फिया, पानी दाल, वा वाटर लेन्सको रूपमा पनि चिनिन्छ, डकवेड ताजा पानीको वातावरणमा बढ्छ र विश्वव्यापी रूपमा फेला पार्न सकिन्छ। डकवीड जेनेरामा, विभिन्न प्रजातिहरू जस्तै स्पिरोडेला, ल्यान्डोल्टिया, लेम्ना, वोल्फीला र वोल्फिया परिचित छन्। किनकि लेमना प्लान्टमा द्रुत बृद्धि क्षमता छ जुन दैनिक आधारमा आकारमा दुई गुणा बढाउन सक्षम छ, डकवेडले पोषण, खाद्य सुरक्षा, र कार्यात्मक खाद्य पदार्थको क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरू र खाद्य इन्जिनियरहरूको चासो लिएको छ। दक्षिणपूर्व एशियाको भागहरूमा, duckweed आफ्नो पोषण घनत्व को लागी लामो समय देखि परिचित छ र उपनाम द्वारा चिनिन्छ “तरकारी मीटबल” यसको उच्च प्रोटीन सामग्रीको कारण (dry 45% भन्दा बढी ड्राई मास)। डकविडले पूर्ण प्रोटीन प्रोफाइल प्रदान गर्दछ (जस्तै कुखुरा अण्डा), सबै नौ आवश्यक र छ ससर्त अमीनो एसिडहरू समावेश गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक अर्कर UIP4000hdT dotweed जस्तै बोटानिकलबाट प्रोटीन, लिपिडहरू र फाइटो-पोषक तत्वहरूको निरन्तर निकासको लागि।
डकवेडबाट लिपिडहरू र प्रोटीनहरू
डकविडमा २०-–%% प्रोटिन, –-–% फ्याट, र dry-१०% स्टार्च प्रति सुख्खा तौल रहेको हुन्छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, डकवेडमा अमीनो एसिड वितरण डब्ल्यूएचओ सिफारिसहरूको नजिक छ, जस्तै, 8.8% लाइसाइन, २.7% मेथियोनिन र सिस्टिन, र 7.7% फेनिलालाइन र टायरोसिन। पोलीअनसेच्युरेटेड फ्याट्टी एसिडहरूको सामग्री and 48 र %१% बीचको थियो र एन fat फ्याट्टी एसिडको उच्च सामग्रीको नतीजा अनुकूल एन / / एन ratio ० वा कम अनुपातमा भयो। " (Appenroth एट अल। २०१))
Duckweed को अल्ट्रासोनिक निकासी
अल्ट्रासोनिक निकासी duckweed यौगिकाहरू, विशेष गरी प्रोटीन र लिपिड खाना उत्पादन को रूपमा निकाल्न प्रयोग गरीन्छ। Lemna प्रोटीन खाना र Lemna लिपिड कुशलतापूर्वक जारी र जलीय duckweed बिरूवा देखि अलग छ।
Sonication कसरी Duckweed निकासी को लागी लागू छ?
Lemna फसल पछि, अधिक पानी हटाइन्छ (उदाहरणका लागि, केन्द्रापसार द्वारा)। अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण को लागी, एक बायोमास धनी (ie, Lemna - घन) घोल प्राथमिकता छ किनकि यसले अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया अधिक कुशल बनाउँछ। डकवीड स्लरी डकवेड र पानी वा मनपर्दो अन्य विलायक हुनसक्दछ। यो घोल तिनीहरूलाई एक अल्ट्रासोनिक रिएक्टरमा खुवाइन्छ, जहाँ ध्वनिक cavitation सेल म्याट्रिक्स तोड्न र पानी- वा विलायक-आधारित निकासी माध्यम मा intracellular यौगिकहरु जारी।
द्वारा अल्ट्रासोनिक निकासी एक्सेल्स
हल्का, गैर-थर्मल अवस्था
तपाईंको एक्स्ट्र्याक्शन सोल्भन्ट छनौट गर्नुहोस्
अल्ट्रासोनिक निकासी (लगभग) कुनै पनि प्रकारको विलायकसँग उपयुक्त छ। अनुसन्धान सेटिंग्समा, डकवीड यौगिकहरू पोलर सॉल्भन्ट ईथेनलको साथसाथै विभिन्न गैर-ध्रुवीय घोलक मिश्रणहरू जस्तै मेथेनोल-इथेनॉल, क्लोरोफर्म-इथेनॉल, हेक्सेन-इथेनॉल, डायथिल ईथर-इथेनॉल, पेट्रोलियम ईथर-इथेनॉल जस्ता विभिन्न निकासहरू निकालिन्छन्। मात्रा अनुपात।
अल्ट्रासोनिकेसनको साथ संयोजनमा सहि विलायकले duckweed बायोमासको फाइटो-पोषक तत्व जारी गर्दछ। अल्ट्रासोनिकेसन सेलमा अवरोध र विघटनको परिणाम स्वरूप प्लान्ट सेल संरचना समरूप र बिघटन गर्दछ। अल्ट्रासोनिक निकासी बोटानिकल, फ fun्गी, र शैवाल अर्कको उत्पादनको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रेक्टरहरू UIP2000hdT
अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासनको मेकानिजम
तरल पदार्थ वा स्लरीहरूमा मिल्दो पावर अल्ट्रासाउन्डको परिणामस्वरूप ऊर्जा-गहन प्रभावहरू हुन्छन् जस्तै ध्वनिक काभेटेशन, शियर र कम्पनको रूपमा। पावर अल्ट्रासाउन्डका यी प्रभावहरू सेलुलर संरचनाहरू विघटन र विनाश गर्न सफलतापूर्वक लागू गरियो। थप रूपमा, सोनिकेशनले लिपिड, प्रोटीन र कार्बोहाइड्रेटहरूको आणविक बन्धन तोड्छ ताकि लक्षित मक्रोन्युट्रिएन्ट्स र फाइटो-रसायन बोटानिकल कच्चा मालको कोशिका भित्र छोडिन्छ, जस्तै डकवीड। यसैले, अल्ट्रासोनिकेसन तीव्रता र निष्कर्षण काफी छोटा गर्दछ।
Duckweed प्रोटीन र Lipids को लागी अल्ट्रासोनिक Extractors
हिल्सचर अल्ट्रासोनिकबाट उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक निकासी प्रणाली आरमा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिन्छ&डी, सानो, मध्यम आकार र पूर्ण-व्यावसायिक उत्पादन स्तरहरू। उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक एक्सट्रैक्टर्सले निष्कर्षण प्रक्रिया तीव्र गर्दछ र उत्पादन र उच्च गुणस्तरको एक्स्ट्र्याक्ट उत्पादनको समग्र दक्षता वृद्धि गर्दछ। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सले कुनै पनि भोल्युम / प्रक्रिया क्षमताको लागि निकासी उपकरण प्रदान गर्दछ। २ 25 बर्ष भन्दा बढि बोटानिकल एक्स्ट्र्याकमा अनुभव भएको, हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उच्च-प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासनको लागि तपाईंको विश्वसनीय पार्टनर हो!
उच्च प्रदर्शन, अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिकरेटरहरू
हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरूको स्मार्ट सुविधाहरू विश्वसनीय अपरेशन, प्रजनन परिणाम र प्रयोगकर्ता-मित्रताको ग्यारेन्टीको लागि डिजाइन गरिएको हो। अपरेशनल सेटिंग्स सहज सजिलै पहुँच गर्न सकिन्छ र सहज मेनु मार्फत डायल गर्न सकिन्छ, जुन डिजिटल र color टच-प्रदर्शन र ब्राउजर रिमोट कन्ट्रोल मार्फत पहुँच गर्न सकिन्छ। यसैले, सबै प्रशोधन शर्तहरू जस्तै नेट उर्जा, कुल उर्जा, आयाम, समय, दबाव र तापमान स्वचालित रूपमा बिल्ट-इन SD कार्डमा रेकर्ड गरिन्छ। यसले तपाईंलाई अघिल्लो Sonication रनहरू संशोधित गर्न र तुलना गर्न र डकवीड एक्स्ट्र्यासन प्रक्रियालाई उच्चतम दक्षतामा अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ।
हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्स प्रणाली उच्च गुणस्तरको वानस्पतिक अर्कको निर्माणको लागि विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हिल्सचर औद्योगिक अल्ट्रासोनिकेटरहरू सजिलैसँग निरन्तर अपरेशन (२ 24/7/365)) मा उच्च आयामहरू चलाउन सक्छन्। २००µm सम्मको एम्प्लिट्यूड सजिलै स्थिर मानक सोनोट्रोड (अल्ट्रासोनिक प्रोब / सीsहरू) को साथ उत्पन्न गर्न सकिन्छ। अझ उच्च आयामका लागि पनि, अनुकूलित अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोडहरू उपलब्ध छन्। तिनीहरूको मजबूती र कम रखरखावको कारण, हाम्रो अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्सन सिस्टमहरू सामान्यतया भारी शुल्क अनुप्रयोगहरूको लागि र वातावरण वातावरणको लागि स्थापित हुन्छन्।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अब अल्ट्रासोनिक duckweed निकासी, हाम्रो अल्ट्रासोनिक निकासी प्रणाली र मूल्य जानकारी को बारे मा अधिक जान्नको लागि! हाम्रो अनुभवी कर्मचारीहरु तपाइँ संग तपाइँको आवेदन र प्रसंस्करण आवश्यकताहरु छलफल गर्न खुसी हुनेछ!